CAIR ayaa ka digtay diidmo Islaami ah ka dib markii lagu xiray New York - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY CAIR ayaa ka digtay diidmada Islamophobia ka dib markii ay qabqabteen magaalada New York
CAIR ayaa ka digtay diidmada Islamophobia ka dib markii ay qabqabteen magaalada New York
. FILE - Bishan Nofeembar 15, sawirka 2018, wakiil la soo doortay IIhan Cumar, oo ku taal bartamaha D-Minneapolis, Dhegeysiga jihada xubnaha la doortay ee Capitol Hill, Washington. Nin ka soo jeeda galbeedka New York ayaa lagu eedeeyay inuu ku hanjabay inuu dilayo wakiilka US ee Omar Cumar. Xeer ilaaliyeyaasha federaalka ayaa ku dhawaaqay jimcihii 5 April 2019 in Patrick Carlineo Jr. la xiray ka dib markii uu ku hanjabay in uu xafiiska telefishanka Omar ee Washington, DC (Sawirka AP / Pablo Martinez Monsivais, File)
NEW YORK - Koox cadaadis ah ayaa ka digtay in kororka Islaamkuna uu sii kordhi doono ka dib markii Nin u dhashay New York lagu eedeeyay inuu ku hanjabay inuu yahay gole Muslim ah oo geeriyooday. Toddobaadkan, Patrick Carlineo Jr ayaa ka digay "hadal nacayb ah oo nacayb ah".
Carlineo waxaa lagu eedeeyay in uu ku baaqay baaq halis ah xafiiska Wakiilka Maraykanka ee Washington, Ilhan Cumar oo ka tirsan Minnesota. Qareenkiisa ayaa diiday inuu faallo bixiyo.
Cumar wuxuu ka mid yahay haweenka ugu horreeya ee Muslimka loo doorto Congress.
FBI-da waxay xirtay nin kale oo New York ah todobaadkan oo la sheegay in uu la hadlay mas'uullo cad oo ku saabsan dib u dhiska masjidka New Zealand. Xasuuq.
Thomas Alonzo Bolin ayaa lagu eedeeyay inuu been u sheegey wakiilada federaalka ah haddii uu haysto hub. Qareenka Bolin ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.foxnews.com/us/cair-warns-of-increasing-islamophobia-after-new-york-arrests
Cameroon - waayitaankii Tino Baroza: Ku soo celi nolosha yar ee loo yaqaan 'virtuoso of guitar